DHAGAYSO: Maxaa ka jira in Janaraal Galaal uu doonayay in Sargaal ONLF ah ku wareejiyo Itoobiya & halka uu marayo wadahadalkii Ahlu Sunna & Galmudug. – Xeernews24
DHAGAYSO: Maxaa ka jira in Janaraal Galaal uu doonayay in Sargaal ONLF ah ku wareejiyo Itoobiya & halka uu marayo wadahadalkii Ahlu Sunna & Galmudug.
General Maxamed Nuur Galaal, ayaa si adag u beeniyay wararka sheegaya in Dowladda Itoobiya uu qandaraas uga soo qaatay Sarkaal ONLF ah, oo maalmo ka hor lagu qabtay Magaalada Gaalkacyo.
Warbaahinta qaybteeda, ayaa qoreysay in Dowladda Itoobiya ay General Maxamed Nuur Galaal u soo martay, sidii loogu soo gacan-gelin lahaa C/xakiin Sheekh Muuse (Qalbi Dhagax).
C/xakiin Sheekh Muuse, ayaa la tilmaamay in loo gudbiyay Magaalada Cadaado, ka dib qabashadiisii Gaalkacyo. Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), ayaa markii dambe ninkaasi u kaxeeyay Magaalada Muqdisho, iyagoona ka hortagey in lagu wareejiyo Itoobiya.
Sarkaalkan oo lagu sheegay inuu xubin sare ka yahay Jabhadda ONLF, ayaa waxaa baadigoob ugu jirtay Xukuumadda Addis Ababa.
General Maxamed Nuur Galaal oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada Cadaado, ayay Warbaahinta qaybteeda tebisay in uu u jooggo, sidii Qalbi Dhagax loogu wareejin lahaa Itoobiya.
General Galaal ayaa sheegay inaanu wax shaqo ahi arrintaasi ku lahayn, isla-markaana aanay sal iyo raad toona lahayn wararka sheegaya in Itoobiya uu qandaraas kaga soo qaatay soo qabashada Qalbi Dhagax.
Mar la weydiiyay in ciidan uu watay ay Deegaanada Galmudug ka raadinayeen Sarkaalka ONLF ka tirsan, ayaa waxaa uu sheegay inaysan jirin wax ciidan ah oo uu wato, isla-markaana uu keligii uun yahay.
Su’aal ahayd halka Saxaafadda ay ka heshay in General Galaal uu baadigoobayo Sarkaalka ONLF, ayaa wax aan macno lahayn ka soo qaaday Warbaahinta Somalida, isla-markaana uu nin meel fadhiyaa uu iska hindisay warka ceynkaasi ah.
Su’aal lagu celiyay oo ahayd in isagoo ka tirsan Booliska Adduunka (Interpol) uu heshiis ku soo qaatay in Qalbi Dhagax la soo qabto iyo in kale, ayaa isagoo qoslaya waxaa uu sheegay inaanu ebid xiriir la yeelan Interpol.
General Galaal, ayaa qiraya in Magaalada Cadaado uu u joogay, sidii la isugu soo dhawayn lahaa Maamulada Galmudug & Ahlu Sunna, oo wax kale oo intaasi dhaafsiisan aanu u joogin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/galaal.jpg 194 259 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-28 06:48:272017-08-28 06:48:27DHAGAYSO: Maxaa ka jira in Janaraal Galaal uu doonayay in Sargaal ONLF ah ku wareejiyo Itoobiya & halka uu marayo wadahadalkii Ahlu Sunna & Galmudug.
C/salaan Caato oo warbixin ka qoray isku dhex yaacii dhanka warbaahinta ee ka... Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista HawadaMuqdisho ayaa laga maamulayaa Hawada Soomaaliya...